Muqdisho: Mas'uul Katirsanaa Wasaaradda Maaliyadda Oo Lagu Dilay Degmada Wardhiigleey.
Sunday July 09, 2017 - 20:13:30 in Wararka by Super Admin
Magaalada Muqdisho waxaa wali kasii socda dilalka qorshaysan ee ka dhanka ah askarta iyo saraakiisha dowladda Federaalka.
Maanta gelinkii dambe ayay Rag hubeysan degmada Wardhiigleey ku Khaarijiyeen Saciid Kaarshe oo kamid ahaa wasaaradda Maaliyadda DF-ka sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah.
Weerarkan oo ka dhacay xaafada Xamar Bile ee degmada Wardhiigley waxaa fuliyay rag bastoolado ku hubeysan kuwaas oo markii dambe isaga dhaqaaqay goobta sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka, ciidamo katirsan DF-ka oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn goobta weerarka ka dhacay uma suurtagelin in ay usoo gurmadaan sarkaalka labeegsaday.
Xarakada Al Shabaab ayaa durbadiiba sheegatay Mas'uuliyadda mas'uulkan katirsanaa wasaaradda Maaliyadda sida lagu sheegay war lagu faafiyay Website-ka Idaacadda Andalus "Sarkaal Mujaahidiinta ka tirsan wuxuu noo sheegay in howlgalku uu ahaa mid qorsheysan, lagana gaaray hadafkii laga lahaa" sidaas waxaa sheegatay Al Shabaab.
Dilka Saciid kaarshe wuxuu ku biirayaa silsilado dilal qorshaysan ah oo todobaadyadii ugu dambeeyey ka dhacayay magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu beegsanayay saraakiisha iyo madaxda dowladda Federaalka.